ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt ရာသီ ၃၊ အပိုင်း ၁၀ ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်း - Kimmy သည် Heist မှဆွဲထုတ်ခြင်း! - Netflix မူရင်း
ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt ရာသီ ၃၊ အပိုင်း ၁၀ ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်း - Kimmy သည် Heist မှဆွဲထုတ်ခြင်း!
ချိုးဖျက်နိုင်သော Kimmy Schmidt- ဓာတ်ပုံချပ် - Eric Liebowitz / Netlix
15 လိမ္မော်ရောင်သည်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူအတွက်ဖြန့်ချိသင့်သည့် New Black ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် HBO: 'စစ်မှန်သောသွေး' ကြယ်ပွင့်နယ်လ်ဆင်အဲလစ်သည်အရက်သောက်ခြင်းမှသေဆုံးခဲ့သည်
အနိုင်ရနိုင်သော Kimmy Schmidt ရာသီ (၃) တွင်“ Kimmy Pulls OffaHeist” (အပိုင်း ၁၀) တွင် Kimmy သည်ဒေသဆိုင်ရာဓာတ်ဆီဆိုင်ရေချိုးခန်းအားတရားမဝင်သုံးစွဲနိုင်ရန် Titus အားကူညီရန်အရှိန်မြှင့်ထားသည်။
Netflix ရဲ့ဒသမဇာတ်လမ်းတွဲ၏အအေးပွင့်လင်းမြင်ကွင်းတစ်ခု၌တည်၏ ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt က ရာသီ ၃ တွင် Jaqueline သည် Peter Stuyvesant ရုပ်ထုကိုတက်။ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သည်။ သူမသည်ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် NFL ပိုင်ရှင်များအစည်းအဝေးတွင်သူမသည်သူ၏အဖိုးတန်ဝါရှင်တန် redskins ၏နာမကိုအမှီပြောင်းလဲနေတဲ့ရဲ့ကပြောထားသည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိတုနှင့်ရုဗင်တို့၏နေ့ရက်ကိုကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ထဲမှထွက်လာသည်။ တိတုသို့သော် Rueben ရဲ့စိတ်ပျက်ဖို့တိုတောင်းသောနေ့ရက်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Orson နဲ့ Duke Snyder က Jaqueline ရဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်လာပြီး Orson ကသူ့သားရှုပ်ထွေးမှုကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သူကသူမမှာဘာတွေရှိလဲလို့မေးတော့သူမဖိတ်တာ။ သူမသည်သူမအားသူမ၏တောင်းဆိုချက်များကိုပြောပြသည်၊ သူသည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုမကြိုက်ကြောင်းပြောခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ Jaqueline သူမ၏မြေပြင်ရပ်။ သူတို့ကအစည်းအဝေးသွားကြတယ်။ သူတို့ရောက်တဲ့အခါအဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Redskins ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒပြသံတွေရှိတယ်။ Jaqueline နှင့် Orson တို့သည် SUV မှထွက်ခွာလာကြပြီးသူတို့လမ်းလျှောက်ရင်း Jaqueline ကသူမ၏မိဘများကိုတွေ့သည်။ သူမသည်ကျော်သွားပြီးသူမ၏အစီအစဉ်ကိုပြောပြသော်လည်းသူတို့ကသူမမည်သို့ဆွဲထုတ်မည်ကိုသတိထားကြသည်။
Kimmy သူမ၏နှင့်တိတု၏တိုက်ခန်းကိုသန့်ရှင်းစေလျက်, တိတုသည်သူ၏နေ့စွဲကနေအိမ်ပြန်ရောက်နေစဉ်။ သူမကဘယ်လိုသွားလဲလို့သူ့ကိုမေးတယ်၊ သူလည်းသိပ်သဘောမကျဘူး။ သူကရက်စွဲကနေအိမ်ပြန်သည်သူ၏လမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ပိုစိတ်ဆိုးပါတယ်။ သူသည်ရေချိုးခန်းကိုသုံးခဲ့ရသည်၊ ရက်စွဲများသို့မဟုတ်အိမ်တွင်နေစဉ်၎င်းကိုဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုတွင်ရပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်အသစ်ကသူ့အားတစ်ခုခုကို ၀ ယ်စေခဲ့သည်။ သူက Kimmy ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုသော်လည်းသူမ၏အစိတ်အပိုင်းကိုမလိုချင်ပါ။
ပြန်သွားလာ wentworth သောအခါ
Kimmy အနေဖြင့်တစ်ခုခုဝယ်ယူရန်နှင့်ရေချိုးခန်းမှသော့ကိုရရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူမက Titus ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာကော်ပီတစ်ခုလုပ်ဖို့ run နိုင်အောင်ရေချိုးခန်းပြတင်းပေါက်ကနေသော့ကိုထုတ်ပစ်တော့မယ်။
Kimmy ရဲ့ heist ထံမှတက်လှုပ်။ သူမသည်ရေချိုးခန်းသုံးရန်အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသောကြောင့်တိတုသည်ပြေးသောအခါ pixie stix တစ်ခုပြုလုပ်သည်။ သူသွားနေစဉ်ပိုင်ရှင်ကိုအာရုံလွှဲရန်သူမကိုသူလိုအပ်သည်။ Kimmy, သို့သော်, တော့ဘူးက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Titus ကသူမကိုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။ Titus အိမ်သာသို့ပြေးသွားစဉ် Kimmy သည်ပိုင်ရှင်အားအကြိမ်များစွာအာရုံလွဲသွားစေသည်။
ပိုင်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲခန်းမတွင် Jaqueline ကသူမ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုကြေငြာပြီး Duke ၏ဗီဒီယိုကိုပြသရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သျောလညျး, က Duke ရုံအစွန်းရောက်ဖြစ်လာဘို့အဖမ်းခံရကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် Orson ကသူ့ကိုယ်ပိုင်သားနှင့်အခြားပိုင်ရှင်များသည်သူ၏လုပ်ရပ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ပြုလိမ့်မည်ဟုအံ့အားသင့်ပါတယ်။ သူမသည်ရှုံးနိမ့်ထွက်လိုက်ပို့ပါတယ်။
သေလွန်သောသူတို့သည်ရာသီ5netflix လွှတ်ပေးရန်လမ်းလျှောက်
အဆောက်အအုံမှထွက်ခွာသွားသည့်အတွက် Jaqueline ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်သူမ၏မိဘများအားတောင်းပန်ခဲ့သည်။ သူမသည် Dakota Sioux ၏လှည့်ကွက်ပင့်ကူသည်သူမကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုထင်သော်လည်းသူမ၏မိခင်ကသူမဘက်မှသူလိုချင်သောအရာမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်အခြားဆန္ဒပြသူများအား redskins ကုန်ပစ္စည်းများကိုမီးရှို့နေသည်ကိုတွေ့သောအခါသူမစွန့်လွှတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်တွေဂရုစိုက်တာအားလုံးကပိုက်ဆံပဲဆိုတာသူကသတိပေးပါတယ်၊ လူတွေမီးလောင်နေရင်သူတို့အများကြီးဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။
Kimmy နှင့် Titus တို့သည်တိုက်ခန်းတွင်းသို့ပြန်ရောက်လာကြပြီးဖမ်းမိခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အစဉ်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအချိန်မှာ Paulie ဟာဓာတ်ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင် Kimmy နဲ့ Titus ကိုဖမ်းစားနေလို့ပါ။ သူကသူမ၏ ဦး ခေါင်း၌ရဖို့ကြိုးစားပါတယ်, သူသည်တိတုအိမ်ပြန်လာသောအခါ Kimmy အက်ဖို့လာမယ့်။
Jaqueline ကအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုသိပြီးအမြန်စဉ်းစားပြီးတိတုကိုနိုင်ငံတော်သီချင်းကိုသီဆိုဖို့ခေါ်လိုက်သည်။ သူမရဲ့ဖခင်ကအသံချဲ့စက်ကိုဖွင့်ပြီးပိုင်ရှင်တွေကြားနိုင်မှာပါ၊ ဒါကသူမရဲ့ကွန်ဖရင့်ခန်းကိုတက်ဖို့အချိန်အလုံအလောက်ရှိတယ်။
တိတုသည်နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုသီဆိုစဉ်ကင်မီကကူးယူထားသောသော့ကိုမြစ်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည်။ ရုတ်တရက်သူမနောက်ကွယ်မှတိတုကပြုံးရယ်ပြီးသူသည်မိတ္တူကူးထားကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူထွက်ခွာသွားသည်နှင့်အမျှမိမိပဝါကိုရေချိုးခန်းအတွင်းထားခဲ့သည်ကိုသူသတိပြုမိသည်။ သူသည်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်း Kimmy သည်တားမြစ်ထားသောဖောက်သည်များ၏နံရံပေါ်တွင်တင်ရန် Titus ကိုစတိုးဆိုင်သို့ဆွဲခေါ်သွားသည်။
Jaqueline သည်ဆန္ဒပြသူများသည်စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းကျိုး၊ ပိုင်ရှင်များ၏လောဘကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ သူမသည်မိခင်အမေရိကန်များထက်ပိုမိုကြီးမားသောအုပ်စုကိုပြစ်မှားမိရန်သူကအကြံပြုသည်။ သူမကအခြားပိုင်ရှင်များလည်းအလားတူပြုအကြံပြုသည်။ ပိုင်ရှင်တွေကစိတ်ကူးကိုလုံးဝသဘောကျကြတယ်။
အဘယ်ကြောင့် hulu တောင်ဘက်ပန်းခြံကိုဖယ်ရှားခဲ့တာလဲ
ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်များ
ဓာတ်ဆီဆိုင်အရောင်းဆိုင်တွင် Kimmy သည် Paulie အားအစအဆုံးသတိထားလာရန် Titus လည်ပတ်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။ သူပြေးနေစဉ် Mikey သို့ပြေးသွားသည်။ သူတို့ကစကားပြောကြတယ်၊ အဲဒါကပေါ်လီကိုတိတုကရေချိုးခန်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အချိန်အလုံအလောက်ပေးတယ်။ Mikey ထွက်ခွာသွားပြီး Titus က Mikey ဟာတကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဆိုလိုတာကသူပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဆိုလိုသည်။ ရုဗင်ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးဖို့သူ့ကိုအားပေးတယ်။
ခဏကြာတော့ Kimmy, Jaqueline နဲ့သူ့မိဘတွေဟာ Jaqueline ရဲ့တိုက်ခန်းမှာတီဗီကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဘောလုံးအသင်းနာမည်အားလုံးပြောင်းပြီး Jaqueline သည်သူ့မိဘများ၏လေးစားမှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက် mom, ရာသီမည်မျှ
ဘယ်အချိန်မှာ Jurassic ကမ္ဘာကြီးပြိုလဲနိုင်ငံတော်ကို netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်